Company Culture - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Iyada oo alaabta tayo sare, weyn ka dib iibka adeegga iyo siyaasadda damaanad, waxaan ku guuleysan isku hallaynayay tan iyo lammaane badan oo dibada, jawaabcelinyo badan oo wanaagsan goobjoog koritaanka our warshad ee.
had iyo jeer waxaan qaban on shirkadda ee mabda'a "daacad ah, xirfad, wax ku ool ah iyo hal-abuurnimo", iyo ergooyinka ka mid ah: ha darawaliinta oo dhan ku raaxaysan ay driving habeenkii, ha shaqaalaha ay xaqiijin karaan qiimaha nolosha, iyo in ay ka xoog iyo adeeg dad badan. Waxaan goostay inaan noqdo integrator ee suuqa wax soo saarka iyo bixiyaha adeegga one-stop suuqa wax soo saarka our.
Waxaan mar walba ku adkaysanayaan on rogo oo maamulka "Tayada First waa, Technology waa Aasaaska, Daacadnimo iyo Innovation" .Waxaanu ay awoodaan si ay u horumariyaan waxyaabaha cusub si joogto ah heer sare si ay u qanciso baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Waxaan leenahay nidaamka tayada adag oo dhamaystiran, kaas oo ay hubisaa in wax soo saarka kasta oo kula kulmi kartaa shuruudaha tayada macaamiisha. Ka sokow, dhammaan waxyaabaha our ayaa si adag loo kormeero hor shixnad.
Our Skills & Khabiirro
Waxaan dhigay "noqon dhakhtar qaadan si ay u gaaraan horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo" sida ku dhiga. Waxaan jeclaan lahaa in ay wadaagaan waayo-aragnimo our saaxiibada gudaha iyo dibaddaba, si ay u abuuraan cake weyn leh dadaalada wadajir ah. Waxaan leenahay dhawr la kulmay R & D dadka, waanan soo dhawaynaynaa amar OEM.